အရမ်းထက်မြက်လွန်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု သိပ်မရှိနိုင်ကြဘူး
သင့်မှာ အရမ်းကြီး မထက်မြက်တဲ့ အလုပ်ရှင် တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးလား?
လူမှုကွန်ရက်တွေက သင့်အတွက် ဆေးလား၊ ဘေးလား?
နည်းပညာတွေ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာချိန်ကနေစလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေအကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဘာကြောင့်ရေရှည်မခံသလဲ
နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ မိသားစုနဲ့နေရတာထက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ကုန်ဆုံးရတဲ့ အချိန်က ပိုများပါတယ်။
ဒီလိုနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ အပေါင်းအသင်းအချင်းချင်းကြား (ကလေးအရွယ်မဟုတ်ပါဘဲ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေဆီမှာတောင်) 'သူကဟိုလူ့ကိုတော့ပိုခင်တယ် ငါ့ကိုတော့သိပ်မခင်ဘူး ဟိုလူ့ကိုတော့အရေးပေးတယ် ငါ့ကိုတော့ပစ်ထားတယ်' အစရှိတဲ့ အတွေးတွေက ရံဖန်ရံခါ ဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်များပါလိမ့်?
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက စုန့်မင်းဆက်ခေတ်မှာ လယ်သမားတစ်ယောက်ဟာ ကံကောင်းခြင်းတွေ သူ့ဆီ ရောက်လာဖို့ အမြဲဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဆိုတာကိုထားလို့ ရန်ကုန်ကိုပဲ ဥပမာအဖြစ်ပြောပါရစေ။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကုန်တိုက်အတော်များများဟာ
တစ်ခါက ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာ နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ မြို့တော်မှာ ဖြတ်လျှောက်သွား ပါတယ်။
အလျင်စလို ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ အမှား
တစ်ခါဟာ ဧကရာဇ်မင်းတစ်ပါးဟာ သူအနှစ်သက်ဆုံး သူ့ရဲ့အမတ်တစ်ဦးကို စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေပြီး အမတ်ကို တိုင်းပြည်ကနေ ထွက်သွားဖို့ စေခိုင်းပါသတဲ့။ ဘုရင်ကြီးရဲ့ အမိန့်ကို နာခံပြီး အမတ်မင်းဟာ တိုင်းပြည်ကနေ ထွက်ခွာပြီး ဝေးလံတဲ့ အမည်မသိ ကျေးရွာတစ်ခုက ယာတောတစ်ခု အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဟာ ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ် မရိုးနိုင်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ခေတ်တိုင်း၊ အခြေအနေတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်ညီပြီး ကိုယ့်အတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါပဲ။
စိတ်မလောဘဲနဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လာမှာကိုစောင့်ပါ
တစ်ခါတုန်းက အရမ်းစိတ်မြန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူက ယာစိုက်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ယာခင်းတစ်ခင်းကို သူကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းထွန်ယက်ပြီးမှ ပျိုးကြဲတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သင့်ကိုကြွေနေကြောင်းသိနိုင်တဲ့ အချက်များ
အမျိုးသားတွေ ထက် အမျိုးသမီးတွေစိတ်က ဖတ်ရပိုခက်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အဓိပ္ပာယ်တိုက်ရိုက်ပြောပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ စကားတစ်ခွန်းကို တောင် အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးပေါက်အောင် ပြောနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိ ၊ မရှိ ဆိုတာ ခန့်မှန်းတတ်သူအဖို့တော့အဆင်ပြေပေမဲ့
ရိုးသားသည့် သူဆင်းရဲအထမ်းသမား အဘိုးအို
တစ်ခါက ချမ်းသာတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ အိမ်မှာ New Year ပါတီပွဲကြီးတစ်ခုကို ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေပါသတဲ့။
ချစ်သူများနေ့မှာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ဘယ်လို ဒိတ်လုပ်ကြမလဲ
ဗယ်လင်တိုင်းနေ့အတွက် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ရင်ခုန်စွာ ဖြတ်သန်းဖို့ အစီအစဉ်တွေ စဉ်းစားနေကြလောက်ပြီ ပေါ့နော်။ ဒီတော့ ဒီဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်နေ့လေးမှာ အစားအသောက်တွေ၊ လက်ဆောင်လေးတွေနဲ့ တခြားပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေ စဉ်းစားပြင်ဆင်နိုင်အောင် ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။